किन हुन्छ हृदयघात ‘हर्ट अट्याक’? - Malayakhabar
होम पेज फिचर किन हुन्छ हृदयघात ‘हर्ट अट्याक’?
आजभोलि हर्ट अट्याक ( हृदयघात ) कम उमेरका मानिसलाई पनि हुने गरेको छ । तर हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन्।
आउनुस् आज हामी हर्ट अट्याक हुनको कारण र यसले शरीरमा पर्ने असर बारे चर्चा गर्दै छाैं।
कमजोर मुटु :
मानिसको मुटु मजबूत कोशिकाहरुले बनेको हुन्छ । जसका कारण हाम्रो मुटु स्वस्थ रहन्छ तर आजभोलिको अस्वस्थ्य खानपिनका कारण कम उमेरमै यसमा समस्या आउने गरेको छ।
ज्यादा धूम्रपान गर्ने मानिसलाई हार्ट अट्याकका खतरा ज्यादा हुन्छ भने कहिले काही यो वंशाणुगत कारणले पनि हुने गरेको छ।
रक्त सञ्चारमा रूकावट :
हाम्रो शरीरमा मटुको काम भनेको अक्सीजन, पोषक तत्व तथा रगतलाई पम्प गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पु-याउने हो।
रगतको प्रवाह :
जब हाम्रो शरीर को धमनिमामा रुवावट हुन्छ तव शरीरमा रक्त प्रवाह सुचार हुन सक्दै जसका कारण कायौं पटक हर्ट अट्याक हुन सक्छ।
धमनिमा विभिन्न पदार्थहरु जम्मा हुन जाँदा रक्त सञ्चारमा रोकावट हुन्छ । जसका कारण दौडिदा मुटु धेरै धड्कन्छ वा पम्प गर्छ तर रक्तनलिमा रुकावट आउदा आवश्यकता अनुसारको रक्त प्रवाह हुन सक्दैन र हर्ट अट्याक हुन जान्छ।
अक्सीजनको कमी :
धमनि बन्द भएसँगै हाम्रो मुटुमा पर्याप्त मात्रामा रगत तथा अक्सीजन पुग्दैन जसका कारण तिव्र रुपमा धड्कन जान्छ र श्वास फेर्न समस्या आउँछ । जो हार्ट अट्याकको कारण बन्छ।
दिमागमा समस्या :
जब मुटुमा अक्सीजन को कमी हुन थाल्त तव मुटुले मस्तिष्कमा इमरजेन्सी सिग्नल पठाउँछ।
त्यसपछि मस्तिष्क यो इमरजेन्सी सिग्नल हड्डीमा पठाउँछ र मुटुमा अक्सीजन को कमी भएपछि शरीरको दोस्रो हिस्साको अक्सीजन सप्लाई कम गरिदिन्छ।
यस्तो स्थितिमा शरीर को दोस्रो हिस्सा जस्तै गर्दन, कान, काँध, पाखुरामा पीडा हुन्छ । भने टाउँको बीचमा चर्को दुखाइ हुन्छ, जो हर्ट अट्याकको संकेत हो।
संकेतः दुखाइ :
हर्ट अट्याकको पीडा झेल्नु मुटुको मजबूतीमा निर्भर हुन्छ । यही कारण जवानहरुले हर्ट अट्याकको पीडालाई सामान्य रुपमा झेल्ने गरेका छन् । यो पीडा केही क्षण मात्र हुन्छ भने कही अवस्थामा भने यो कयौं घण्टा सम्म पनि हुने गरेको छ।
यस्तो स्थिति मा तुरुन्त डाक्टरसँग जाँच गराउन आवश्यक छ ताकि समय रहदै यसमा नियन्त्रण गर्न सकियोस्। समय रहदै सही उपचार न गर्नका कारण मुटुको मांसपेशिहरु विस्तारै विस्तारै निष्क्रिय हुदै जान्छ र अन्तिममा मुटुले काम गर्न बन्द गर्छ । यस्तो स्थितिमा केही मिनेटमा नै मस्तिष्कको कोशिका पनि काम गर्न छोड्छन्।
हर्ट अट्याक पछि मुटुका केहि हिस्साले काम गर्न छोड्छन् जो फेरि ठिक हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । जसका कारण हर्ट अट्या पछि जुन सुकै समयमा पनि ज्यान जान सक्छ।
हार्ट अट्याकबाट कसरी बच्ने :
हार्ट अट्याकको खतरा कम गर्नका लागि जरुरी छ खानपानमा नियन्त्रण, तथा जीवनशैलीमा परिवर्तन । यसका लागि धेरै मसलेदार खानमा नियन्त्रण आवश्यक छ।
त्यस्तै नियमित रुपमा फलफुल, सलाद, हरियो साग सव्जीको प्रयोग आवश्यक छ । त्यस्तै नियमित रुपमा योग तथा व्यायाम जरुरी छ।
अघिल्लो लेख कोरोना महामारीः लाश गाड्न ठाउँ नपुगेपछि १ हजार पुराना चिहान खनेर कंकाल निकालियो।
पछिल्लो लेख पहिलो पटक महिला सैनिकलाई आफ्नै अन्डरवियर लगाउन अनुमति।